Haul de retouuuuur!!!
Asa firy taona izay aho no tsy nanoratra teto. Maro be ny antony, tsy hary ho voataisa. Fa ny mahafaly dia inty aho, tafaverina indray. Asa raha tena tafaverina tokoa na mandalo sy miserana ihany. Fa na izany na tsy izany dia faly aho, tena faly!
Haul no hozaraina anio! Izay vao hanao haul aho eto amin'ity blog ity. Fizarana bon plan angamba no azoko ilazàna azy satria entana novidiko taty Madagasikara, teto Antananarivo no zaraiko androany. Izay no tena mampazoto ahy mizara azy satria maro amitsika aty Madagasikara no afaka mividy azy.
Kit de pinceaux no resahako androany. Asa ianareo fa izaho dia sahirana foana hatrizay mitady pinceaux mba tsaratsara nefa tsy lafo loatra. Efa elaela no nahitako an'ity kit ity tamina site sinoa mpivarotra pinceaux sy maquillage ireny. Efa maro ka ny blogueuses nilaza fa tsara ireo pinceaux ireo. Sady tsara tarehy be ilay izy, satria vita amin'ny hazo ny tahony. Araka ny nantenaiko koa dia malefaka izay tsy izy ny volony sady matevina be.
Misy pinceaux 11 ity kit, izay voafono plastika tsirairay. Avy eo izy rehetra dia nataon'ny mpanamboatra azy ao anaty fonony iray mitambatra, vita amin'ny lamba soga manify.
Ny 6 amin'ireo pinceaux ireo dia natao hoan'ny tarehy, ametrahana ny fond de teint, correcteur, poudre, blush, sns. Ny 5 ambiny kosa no hoan'ny maso. Isany nividianako manokana an'ity kit ity ny fisian'ny pinceaux telo afaka anaovana estompage. Io foana moa no sarotra tadiavina rehefa mividy an'itony kit de pinceaux itony. Matetika mantsy pinceaux plats be dia be fotsiny no mameno azy. D'ailleurs, nisy kits karazany hafa tao amin'ilay mpivarotra fa ity irery no nisy pinceaux estompeurs. Satria moa aho adalana estompage dia tena nadrian'ny saiko mihintsy ity kit iray ity.
Ny indro kely, raha azoko atao hoe indro, dia kely tsy toy ny nieritreretako azy ireo pinceaux. Ilay kabuki io ohatra dia fohy nohon'ny ankihibeko. Saingy ny hatsaran'ny volony izay malefaka sy matevina aloha dia mahafa-po ahy tanteraka.
Tamin'ny voalohany koa dia nisy nihintsana ny volony. Izany hoe volo roa na telo tamin'ny pinceaux sasany ihany no niala dia izay.
Tao amin'ny Galerie Arena Antanimena Box 7 no nividianako an'ity kit de 11 pinceaux ity ary 40 000ar ny vidiny.
Tsara ve ny produits vidina eny amin'ny sisiny?
Nampiseho palette iray izay aho omaly tao amin'ny page Izay tia maquillage dia nisy nanotany hoe inona ny marque, avy aiza sns. Palette novidiako teny Ambodin'Isotry indray sabotsy ilay izy. Easy Paris ny marque. Ity amin'ny sary ity ilay izy
Io no palette de nude tiako indrindra amin'ny produits misy ato amiko nefa dia 500ar no nividianako azy. Dia nisy namana nanotany hoe tsara ve ny produits vidina eny amin'ny sisiny?
Efa nividy produits teny amin'ny sisiny aho. Ny sisin'ny pavillons analakely no tena fijerijeriko fa rehefa mandalo tsena aho dia manopy maso mijery sao misy mahasarika. Hatreto dia vernis na fards en poudre no efa novidiako teny. Tsy sahy aho raha produits mihendrika crème toy ny fond de teint na lokomena. Ny antony dia satria mieritreritra aho hoe miditra any anaty hoditra ilay crème fa tsy toy ny poudre izay mijanona eo ivelany. Mety diso aloha izay fa izay moa no atao an-tsaiko.
Tsy mbola nanana olana tamin'ny produits novidina teny amin'ny sisiny nampiasaiko aho nefa kosa tsy mamporisika velively hoe mividiana eny na tsia. Arakaraky ny tsirairay ihany io ary misy ny hoditra tsy mazaka raha tsy akora avo lenta.
Raha ny lafiny loko indray dia tena afa-po aho. Raisiko ireto fards à paupières ireto. Sady marevaka tsara no tsy mamovoka, mateza eo amin'ny hodimaso sy mora apetraka. Nefa dia manodidina ny 500ar avokoa ny nividianako azy ireo (ankoatra ilay palette misy loko sivy io izay novidiako 2.000ar raha tsy diso aho)
Raha fehezina dia tiako dia tiako tokoa ny mampiasa produits misy marque, na marque mora izany na marque lafo fa mba marque fantatra zany e. Maro koa anefa ireo produits novidina teny amin'ny sisiny nahafa-po ahy. Raha ny akora ao anatiny aloha tsy afaka hilaza aho hoe ratsy sa tsara fa azo hitokisana kokoa angamba ny produits misy marque fantatra na dia misy akora tsy manjary ihany aza izy ireny indraindray. Raha ny fahatsarana sy fatezan'ny loko kosa dia tsy mena-mitàha ny eny amin'ny sisiny. Noho izany, dia ianao ihany no erany hoy ilay fiteny izay.
Misaotra anao namaky
Mifarana sahady ny taona. Mino sy manantena aho fa nahita soa tamin’ity taona 2014 ity avokoa isika rehetra. Na nisy aza ny tsy nety dia tsy maintsy nisy koa ny nety. Raha sanatria ka ratsy no betsaka dia nde hioraka fa tapitra izy ity ka atao ho fanantenana vaovao indray ny taona ho avy. Fa na soa na ratsy ny fahitantsika ny taona izay ivalona afaka andro vitsivitsy dia aoka ankasitraka hatrany satria tombony lehibe ho antsika ny mbola velon’aina.
Ho ahy dia isany zavatra nahafinaritra ahy indrindra tamin’ity taona ity ny nanombohako nanao video ao amin’ny YouTube. Tany amin’ny volana jolay tany aho no tapa-kevitra tamin’izany. Mbola zaza miana-mandeha hatramizao nefa dia ampifaliana lalandava no anaovana izany ary ampifaliana ihany koa ny ahitana fa maro isika no mankasitraka na dia tsy mbola matihanina aza aho. Ny azoko lazaina angamba dia misaotra erampo erantsaina antsika rehetra satria “aventure” mahafinarira ity resaka maquillage ity hatramizao. Roa taona izao ny pejy Izay tia maquillage no niforona sady antenaina mbola hitohy ela.
Ity misy tutoriel iray entina mamarana ity taona ity. Mbola te hanao tutoriel iray hafa aho nefa tsy hay ny sampona ka aleoko miteny hoe ity ny farany. Ity ny maquillage ho entiko amin’ny alin’ny faran’ny taona. Fivoriam-pianakaviana moa no hiandrasako ny taona vaovao ka zavatra maivamaivana no natao. Raha handeha alim-pandihizana angamba dia tsaratsara kokoa raha atao betsaka kokoa ny mangirangirana. Jereo ohatra ity tutoriel antsary ity raha maquillage somary sophistiqué no mety aminao hoan’ny réveillon.
Ampy angamba izay ny resa-be fa indro ilay tutoriel. Enga anie ahazoanareo aingam-panahy.
Dia mirary antsika rehetra hamarana ny taona 2014 ao anaty hafaliana, fahasalamana sy hasambarana ka hitsena ny 2015 ao anatin’izany zava-tsoa rehetra izany.
Dia amin'ny herintaona indray ary e
Tutoriel en image: maquillage hoan'ny fety
Ho avy sahady ity ny fetin'ny faran'ny taona. Maro ny zava-miseho ao anatin'izany vanim-potoana izany. Isan'ireny ny fety sy lanonana maro, ohatra hoe ny Krismasy sy ny Réveillon an'ny taom-baovao. Fotoana tena tiantsika koa izao hianjaikàna. Ankoatra ny akanjo sy kiraro dia zava-dehibe ho antsika vehivavy ny taovolo, ny taohoho ary ny maquillage ao anatin'izay fianjaikàna izay.
Nohon'ny fiarahako miasa amin'ny Ze mag!dia nanao fampianarana maquillage hoan'ny fety aho. Tsy toy ireo tutoriel en vidéo efa fanaoko ao YouTube izy ity (Jereo ATO raha te ahita izany tutoriels en vidéo izany ianao) fa natao amin'ny sary. Ny loko doré teto no nampiasaina satria isany loko hitako tena tsara hoan'ny fetin'ny faran'ny taona izy io. Aoka izay ny resa-be fa ndao jerentsika ny fomba nanaovana ity maquillage ity.
Araka ny hitantsika amin'ny sary dia fard crème marron manopy cuivre doré no apetraka voalohany. Aparitaka amin'ny paupière mobile izy io avy eo. Apetraka amin'ny 2/3 ny hodimaso avy eo ny fard doré dia haparitakaindray. Tsy hita eto amin'ny sary moa fa rehefa izay dia atao estompage mba hanalefaka ny sisin'ny fard doré.
Nasiana fard mat mainty ny sisin'ny hodimaso mba anome hendrika somary smoky ny maquillage izay natao. Estomper-na indray ka taritina makaty anatiny ilay mainty iny. Asiana fard mat beige indray ny ambany volomaso (ambany sourcils) mba hitondra ilay atao hoe "touche lumière" na matroka aza ny maquillage dia mazava ihany ny fijery rehefa misy io touche lumière io.
Avy eo dia averina eto ambany amin'ny alalan'ny pinceau kelikely ny loko mainty teo ambony. Asiana crayon mainty koa ao amin'ny muqueuse.
Ny eyeliner sy ny mascara no mamarana ny maquillage-tsika dia vita! Raha mbola tsy mahay manao eyeliner ianao dia jereo ETO fa zaraiko ao ny fomba sy ny fikafika mahasoa, anaovana eyeliner tsotra sy vetivety dia vita.
Faly koa aho mizara aminao ny laharana farany hivoaka hoan'ny Ze Mag amin'ity taona ity. Joie&Noël no loha-hevitra entiny ary tena manimanitra fety tokoa izy ity.
Dia mirary antsika rehetra hanao fety sambatra.
Maquillage mat: tsara koa raha ny loko tsotra (tsy mangirana) no mibahana
Asa ianareo fa izaho matetika tia mampiaraka ny loko mangirana sy ny loko tsotra (mat) rehefa manao maquillage. Mampivoaka ny fijery mantsy ny fifangaroan'ireo karazana loko ireo. Tsy azo hadinoina anefa fa ny loko mats maromaro miaraka koa dia mamoaka maquillage tsara jerena. Raha hoan'ny andavanandro dia ireo loko mats ireo aza no hitako mora entina indrindra.
Nanandrana karazana smoky aho teto ka ny marron no tiako nasongadina satria efa ela ihany aho no naniry hanandrana io loko io. Nasiana tsipika mainty manamorona ny volomaso ambony (cils supérieurs) ary nasiana mangirana kely teo amin'ny tendron'ny maso mba hampisokatra ny fijery sy hitondra hazavana kely.
Toy izao no nanaovako azy:
Ny beige aloha no napetraka voalohany teo ambany sourcils mba hanazava an'iny faritra iny ka tsy ahamatroka loatra an'ilay maquillage. Avy eo dia napetraka ny marron antitra teo amin'ny paupière mobile. Rehefa izay dia natao ny estompage, izany hoe afangaro tsara ireo loko mifandray mba tsy hifaritra be. Avy eo dia asiana crayon mainty ny manamorona ny volomaso ambony (ras des cils supérieurs) ka tsindrina fard mainty mba hateza sy ho intense tsara. Raisina indray ny pinceau estompeur dia afangaro sy aparitaka tsara ilay mainty mba ho "fumé" ilay izy fa tsy mifaritra be ny fifandraisan'ny loko marron sy mainty. Asiana fard mainty koa ny moron'ny volomaso ambany dia estomper-na. Avy eo asiana crayon mainty ilay hoditra anaty maso (muqueuse hoy ny teny frantsay) Avy eo maka crayon mangirana (fard en stick gris misy paillettes argentées no nampiasaiko teto) eo amin'ny tendron'ny maso dia faranana amin'ny mascara. Izaho moa tia manisy mascara amin'ny volomaso ambony sy ambany fa afaka tsy asiana ny ambany raha izay no mahazatra anao.
Publié par Unknown à 04:04 9 commentaires:
Tag#003 The perfect palette
Tag indray no ataoko androany. Efa elaela ihany aho no notondroin'i Michou hanao ity Tag ity fa izao moa vao misy fotoana. The perfect palette noanaran'izy ity. Raha adika tsotsotra dia hoe ny palette tonga lafatra. Ho lava angamba raha azavaina amin'ny antsipirihany fa misy fanotaniana maromaro toy ny tag rehetra. Tag mandeha amin'ny blogs sy chaînes YouTube amin'ny teny frantsay na anglisy izy ity. Noho izany dia nadika tsotsotra amin'ny teny malagasy ireo fanotaniana. Miala tsiny raha tsy tonga lafatra ny dikan-teny. Ankoatra izay dia matetika olona manana palettes be dia be sy mahagaga no manao azy ity. Ny ahy tsy dia betsaka sady tsy misy marques be nefa mba tena tiako ilay tag dia nataoko e. Aza omena tsiny. Aoka izay ny blabla, ndao alefa ny tena resaka.
1- Iza amin’ireo palettes anananao no tsara indrindra ny fonony ?
Ity Artist’s it an’i Sephora ity no tiako indrindra ny fonony satria misy loko pastel mifangaroaro ny ivelany. Ny ao anatiny kosa mainty, hitako mihaja be.
2- Iza amin’ireo palettes anananao no tsara indrindra ny loko ao anatiny ?
Gossip Girl an’ny marika Chi Chi izy ity. Loko enina no ao anatiny ary misy paillettes sy reflets izy ireo. Tena mahasondriana ahy tokoa satria loko tsy fahitako amin'ny palette hafa.(Tsy mivoaka tsara amin'ny sary moa ilay loko fa ialàna tsiny)
3- Iza amin’ireo palettes anananao no feno indrindra?
Ity coffret Yves Rocher ity no hitako feno tsara satria misy fards à paupières, blush ary gloss
4- Iza amin’ireo palettes anananao no tsara entina mandeha lavitra
Satria moa feno tsara ny coffre Yves Rocher nasehoko eo ambony dia io no hitako tsara entina mandeha lavitra. Nefa matetika dia zavatra fisapisaka no tsara entina anaty valizy mba tsy hibahana be loatra, noho izany dia ity palettes 88 couleurs warm ity koa no hitako hoe mety entina lavitra satria fisaka sady feno tsara ny loko hoan’ny maso. Misy fards tsotra sy fards mangirana izy ity sady loko azo entina amin’ny fotoana rehetra.
5- Iza amin’ireo palettes anananao no nanenenanao no nividy azy?
Tsy misy tena nanenenako. Ity asehoko ity ohatra somary mamovoka ny fards nefa tsy hanenenako satria tsara ny lokony sady misy brush roa anampiny. Tsy misy marque izy ity fa "vita sinoa".
6- Iza amin’ireo palettes anananao no tsara indrindra ny anaran’ny fards ao anatiny?
Ireo palettes kely an’ny marika ELF no hitako tsara anarana satria tena mifanaraka tsara amin’ny lokon’ny fards. Ocean dreams, Drama ary Day 2 Night no ananako.
Ilay Ocean dreams araka izany anarany izany dia misy loko mampanembona ranomasina satria turquoise, bleu vert sy bleu profond no hita eo.
Ny Drama kosa dia fanaovana smocky eyes.
Ary ny Day 2 Night dia misy fards mazava azo entina amin’ny antoandro ka ampiana amin’ireo matroka fotsiny ny maquillage raha tiana entina amin’ny alina.
7- Iza amin’ireo palettes anananao no tsy dia ampiasainao indrindra?
Eto ampamaliana ireto fanotaniana ireto aho vao tonga saina fa misy palettes vitsivitsy tsy dia miasa nefa tena tsara tarehy ny loko ao anatiny.
Isan'ireny ity palette Glam’Eyes 016 (urban flower) an'i Rimmel ity
Eo koa ity palette novidiako efa ela ity izay efa tsy hita intsony ny anarany
Ity iray ity koa toa tsy dia miasa loatra. Palette nisy nanome izy ity. Tsy hitako intsony ny anarany fa palette sinoa aloha e
8- Iza amin’ireo palettes anananao no ampiasainao indrindra?
Ato amiko dia misy palettes tena mahazatra, tonga dia voaray isaky ny hanao maquillage. Voalohany indrindra ity 100 couleurs marbrées an’i ELF ity.
Ity Brilliant Brown (201) an’i DB Cosmetics ity koa dia tena miasa tokoa, indrindra amin'ny andavanandro.
Ary tsy hadino sy tsy azo hialàna ilay 88 couleurs warm efa noresahako teo ambony.
9- Lazao anay ny palettes tianao hananana
Lorac pro palette an’i Lorac (na ilay 1 na ilay 2 samy tiako handramana) Sary nindramina tamin'ny blog Beauty101blog.com ity hasehoko ity. Vao nivoaka tsy ela akory izay ny palette Lorac super pro (na mitovitovy amin'izay) dia tiako handramana koa. Tsy vidiam-bola ny mandrevy hoy ny vadiko izay.
10- Iza no tondroinao hanao ity tag ity ?
Tondroiko hanao ity tag ity izay Malagasy rehetra liana hizara an-tsary na amin'ny vidéo ireo ny palettes fampiasany.
Jereo ETO ny vidéo nataon'i Michou raha mahaliana anao.
Aza mividy diloilo coco intsony fa manaova ao an-trano
Isany mampimenomenona antsika ny diloilo coco (na menaka coco angamba no tena mahavantana ny maro) vita malagasy satria indraindray mahery fofona izy ireny. Mitapoka zavatza tsy fantatra izy ireny matoa misy fofona mahery. Rehefa "pure" izy dia manitra coco toy ireny sakafo misy hanitra coco rehetra ireny. Raha te hampiasa diloilo coco tena azo antoka ianao sady tsy lafo, tsy aleo ve manamboatra?
Tsy sarotra akory ny manamboatra diloilo coco ary zavatra vitsy monja no ilaina hanaovana azy. Maro ny fomba fakàna ny menaka amin'ny coco ka isan'ireny ity ho zaraiko ity.
- nofona coco (ilay fotsifotsy)
- fikikisana mafy tsara (ohatra: fikikisana karaoty na ireny fikikisana coco ireny)
- zavatra mafana (lafaoro, vilany misy rano mangotraka ...)
- fitatavanana na passoire
- vilia jobo
- bocal na vera
Kikisana ao anaty vilia jobo ny nofona coco. Asiana rano kely dia hafangaro tsara. Volavolao mafy tsara amin'ny tanana roa mba hivoaka ny rano sy menaka ao anatin'ny nofona coco. Atao izay ahazoana fangaro mitovy hendrika amin'ny ronono. Io moa ilay antsoina hoe lait de coco. Afaka mijanona hatreto, nefa koa afaka mampiasa mixer mba hampifangaro azy tsara. Rehefa izay dia tatavanina ka tatazana amina bocal, na vera na zavatra hafa vita amin'ny vera ka mahazaka hafanana.
Hafanao mandritra ny 15min ny lafaoro (180°) na mampangotraha rano kely (tsy mandifotra ilay bocal) ao anaty vitany. Rehefa izay dia pio ny lafaoro na vonoy ny afo nampangotrahana rano ka atao ao ilay bocal. Hidio tsara ny varavaran'ny lafaoro na saromy tsara ny vilany (afaka fonosina bodofotsy koa ny vilany mba hitazona hafanana tsara) Avelao ao indray alina.
Ny ampitso maraina dia hiavaka eny ambony ny menaka fa aty ambany kosa ny rano. Mivaingana toy ny dibera izy ity fa rehefa tratran'ny hafanan'ny tanana dia mitsonika toy ny menaka rehetra. Alaivo moramora amin'ny sotro io menaka mitsingevana io dia tehirizo anaty bocal misarona tsara. Mateza ihany ny diloilo coco raha tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana. Saingy aleo kelikely ihany no atao mba tsy hitehirizana azy mihoatra ny iray volana. Aleo manamboatra matetika toy izay mitahiry ela loatra.
Atao inona moa ny diloilo coco?
Satria moa vokatra voa-janahary izy dia tena maro ny tia mampiasa azy.
Afaka atao démaquillant izy
Afaka hanaovana bain d'huile
Afaka hafangaro amin'ny tai-kafé atao gommage
Afaka hanorana ny kibon'ny zazakely misy rivotra
Mazoto manamboatra diloilo coco ary dia zarao eo amin'ny commentaire na ao amin'ny pejy Izay tia maquillage ny vokatra rehefa manandrana ianao.
Publié par Unknown à 03:49 2 commentaires: